ShweMinThar: မြန်မာတွေ ညံ့သလား ?
ခုတလော မြန်မာတွေညံ.သလားဟူသော မေးခွန်းကိုကျွန်တော်သည် ကိုယ်.ဘာသာ အပြန်ပြန်အလှန်လှန်
မေးနေမိပါသည် ။ မြန်မာ.သမိုင်းကိုပြန်ကြည်.လိုက်သောအခါ အင်္ဂလိပ်တို.အရိုင်းသာသာ သာ လူနေမှုအဆင်.သာ ရှိသေးသော အေဒီ (၆) ရာစုလောက်တွင် ကျွန်တော်တို. မြန်မာများသည် သရေခေတ္တရာပျူနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်လျက် တန်ခိုးရှိန်စော် ကျော်စောခဲ.ကြောင်းကို စာတွေ.သာမက လက်တွေ.အဖြစ် ဘုရားမာ ၊ ဘုရားကြီး ၊ဘောဘောကြီး ၊ဘဲဘဲကြီးစသော ဘုရားစေတီ ဗိသုကာလက်ရာများကိုတွေ.နိုင်လေသည် ။ မြန်မာတို. ဘုန်းမီနေလတောက်ပခဲ.သော ပုဂံခေတ်ကို
ပြန်ကြည်.သောအခါတွင်လည်း သူ.ခေတ် သူ.အတိုင်းအတာ ဘောင်အတွင်းမှ လွန်ခဲ.သော နှစ် ကိုးရာ ၊ တစ်ထောင်လောက်က ရှေးမြန်မာကြီးများ တည်ဆောက်သွားခဲ.သော ဘုရား ပုထိုး စေတီအမျိုးမျိုး၏ ဗိသုကာလက်ရာ နှင်.ယဉ်ကျေးမှုအဆင်းအတန်းမှာ မည်သည်. လူမျိုးကမှ အောက်တန်းနောက်တန်း
ကျသည်ဟု ကျွန်တော်တို.ကိုမပြောနိုင်ရုံမက ကမ္ဘာ ကပါ ယနေ.တိုင်အံ.သြလေးစားရသော အနေအထားများမငြင်းနိုင်အောင်ရှိခဲ.ပါသည် ။
တစ်ဖန်ကျွန်တော်တို.လူမျိုးသည် ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက်ရာတွင်ပင် ထူးချွန်၍ ကျန်သည်.
လူရည်လူသွေး မှာ ဥာဏ်ရည်နုံနဲ.သော လူများ လေတကားဟု စောကြောကြည်.ပြန်ပါလျင်လည်း တစ်ကမ္ဘာ လုံး၏အထွတ်အထိပ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သော ကုလသမဂ္ဂ လိုနေရာမျိုးမှာ ပင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရာထူးကို ၂ ကြိမ်ဆက်တိုက် တာဝန်ကြေပြွန်စွာ ကမ္ဘာကအံ.သြချီးကျူးကြ
ရသောဦးသန်.လိုပုဂ္ဂိုလ်ပင်ပေါ်ပေါက်ခဲ.ဖူးသည်မဟုတ်ပါလော ။ လောကုတ္တရာဘက်မှာကြည်
.ပြန်ပါလျင်လည်း မြတ်ဗုဒ္စ ဟောကြားတော်မူခဲ.သော ပိဋကတ်သုံးပုံ ကို ခြောက်ချားအောင်မွှေနှောက် အာဂုံဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ၁၉၈၃ ခုနှစ်၏ ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ.စံချိန်မှတ်တမ်းတွင် ကမ္ဘာ.ဥာဏ်အကောင်းဆုံးလူသားအဖြစ် သတ်မှတ် မှတ်တမ်းတင်ခံရသော မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးလို ဧရာမ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ထွန်းကားခဲ. သောနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါသည် ။ ကျောင်းသားများဆိုလျင်လည်း ပညာရေးစနစ် ညံ.ဖျင်း၍ သာ နောက်ကျကျန်နေကောင်းကျန်ရစ်မည် ၊ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးအရာ၌ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကုလား ၊တရုတ် ၊ဂျပန် ။အမေရိကန် ၊ အင်္ဂလိပ် မည်သည်. လူမျိုးနှင်.မဆို ဥာဏ်ရည်တူ ပညာသင်ယူနိုင်စွမ်းရှိသော လူသားအရင်းအမြစ်လည်း ရှိနေခဲ.သေးသည် ။ ဤရွေ.ဤမျှ သမိုင်းကြောင်းအရရော ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရရော ၊ ဥာဏ်ရေးဥာဏ်သွေးအရရော အဘက်ဘက် မှ ကမ္ဘာ.အဆင်.မီခဲ.သော လူမျိုးတစ်မျိုးသည် အဘယ်ကြောင်. ယခုကာလတွင် အဘက်ဘက် မှ ကျရှုံးကာ Failure State ဖြစ်နေဘိသနည်း ဆိုသည်ကို ကျွန်တော်သည် အချိန်ရှိတိုင်း ထောင်.ပေါင်းစုံမှ အဖြေရှာနေခဲ.ဘူးပါသည် ။
အလွယ်သဘောနှင်. စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှု ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် နှစ် (၅၀ )ခန်.ရှည်ကြာခဲ.မှုတို.ကိုအပြစ်ဖို.လက်ညှိုးထိုး၍ ရသော်လည်း ထိုအချက်သည် မြန်မာ ကျဆုံးခဲ.ရသမျှ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာ ရှင်းပြနိုင်ခဲ.ပြီး အဓိက အဖြေမဟုတ်ဟုလည်း (ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း၏ ကိုယ်ပိုင် အယူအဆအရ ) ထင်မှတ်မိပါသည် ။ အဘယ်.ကြောင်.ဆိုသော် မြန်မာ.နိုင်ငံရေး၌ စစ်တပ်သည် ၁၉၅၈ ခုတွင်မှ အာဏာနိုင်ငံရေးတွင် စတင်ပါဝင် ပါတ်သက်လာခြင်းဖြစ်ရာပျက်စီးမှုသည် ထိုနှစ်မတိုင်မီ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအမြစ်တွယ်လာခဲ.ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်တော်.အမြင်၌ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အဆင်.အတန်း တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းခဲ.ရခြင်းမှာ အုပ်ချုပ်သူ ဧကရာဇ်မင်းများနှင်. အုပ်ချုပ်ခံ ပြည်သူလူထု၏ စီမံခန်.ခွဲမှု ညံ.ဖျင်းခြင်း မှာအဓိကအကြောင်းဖြစ်သည် ဟုဆိုချင်ပါသည် ။ စီမံခန်.ခွဲမှု ( management ) ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသော မင်းကောင်းမင်းမြတ်တို.လက်ထက်တွင် တိုင်းပြည်သည် စည်ပင်ဝပြောလေ.ရှိပြီး ၊ ဤနိုင်ငံ ၊ဤလူတွေပင်ဖြစ်ပါလျက် စီမံခန်.ခွဲမှုညံ.ဖျင်းသော ဘုရင်များ ၊ အစိုးရ များလက်ထက်တွင် တိုင်းပြည်သည် ၀ါးအစည်းပြေသကဲ.သို.အဖက်ဖက်မှ ချွတ်ခြုံကျ တတ်စမြဲဖြစ်သည် ။ စီမံခန်.ခွဲမှုဆိုသည် မှာ ရှုပ်ထွေးပွေလီလှသော နည်းနာနိသယများ ၊ ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ်မျာကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲ အနှစ်ချုပ်အားဖြင်. လုပ်သင်.သည်ကိုမလုပ်ခြင်း ၊ မလုပ်သင်.သည်ကိုလုပ်ခြင်း ဟူ၍ အမှားနှစ်ခုကိုပဲထပ်ကာထပ်ကာ ပြုလုပ်မိခြင်း၊ မကြာခနပြုလုပ်မိခြင်းကိုဆိုလိုပါသည် ။ ဥပမာအားဖြင်. စီမံခန်.ခွဲမှု ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသော အလောင်းဘုရားလက်ထက် ၊ နောင်တော်ကြီးမင်းလက်ထက် ၊ ဆင်ဖြူရှင်မင်းလက်ထက်၊
စဉ်.ကူးမင်းလက်ထက် ၊ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်တို.တွင် အင်္ဂလိပ်သည် မြန်မာ.အချုပ်အခြာ
အာဏာကိုထိပါး နိုင်ခဲ.ခြင်းမရှိပဲ ၊စီမံခန်.ခွဲမှု ညံ.ဖျင်းသော စစ်ကိုင်းမင်းခေါ်ဘကြီးတော်ဘုရားလက်ထက်တွင်သာ သွေးတိုးစမ်း တိုက်ခိုက်ပြီး ရခိုင်နှင်.တနင်္သာရီ ကို ပထမကျူးကျော်စစ်ဖြင်.သိမ်းပိုက်ခဲ.ပါသည် ။ ပုဂံမင်း ၊ သီပေါမင်းတို.လက်ထက်မှာ နိုင်ငံတော်ကိုလုပ်ကြံခံရခဲ.ပါသည် ။
ဘကြီးတော်ဘုရား၏ စီမံခန်.ခွဲမှု အလွဲမှာ မဘက်လိုက်၍ မိုက်ဘက်ပါရာမှစသည် ။ သူသည် ညီတော် အိမ်ရှေ.ဥပရာဇာ သာယာဝတီမင်းသား ထက် မိဘုရားခေါင်ကြီး မယ်နုနှင်. ၊ မယ်နု၏ မောင်တော် မောင်အို ကို စလင်းမြို.ကို စားစေပြီး မင်းသားကြီးနေရာတွင်ထား သည်.အပြင်(ယောက်ဖကို) ညီတော် သာယာဝတီမင်းသားထက် ပိုမိုချီးမြှောက်ကာ သတိုးဓမ္မရာဇာဘွဲ.ပေးပြီး အစီးအနင်း၊အဆောင်အရွက် ၊ဗောင်း ၊နားတောင်း၊ ၀တ်လုံနှင်.တကွ အိမ်ဖြူပြတင်းရွှေချ ၊ ရှေ.ဆောင်ဦးမှီတိုင်နှစ်လုံးရွှေချ ၊ နောက်ဆောင်မှီတိုင် ၂ တိုင် ရွှေပိန်းချခွင်.ပေးကာမြှောက်စားထား၏ ( မှတ်ချက် မြန်မာဘုရင်များခေတ်က မင်းညီမင်းသားများသည် မိမိစံအိမ်ကို ဘုရင်. အခွင်.အမိန်.မရပဲ ရွှေပိန်းချခွင်.မရှိပေ ) ။ ဆိုလိုရင်းမှာ ဘုရင်သည် နန်းတွင်းဓလေ.များကို ဘာမှနားမလည်သော ယောက်ဖကို မိဖုရားကြီးမယ်နုမျက်နှာနှင်. ရာထူး ဘွဲ.ထူးအပြင် လုပ်ပိုင်ခွင်.များလွန်လွန်ကဲကဲ ပေးထားသည်ကိုတွေ.နိုင်၏ ။ ထိုသိုလွဲမှားစွာ စီမံအုပ်ချုပ် ရာထူးခန်.ထားမှူများဖြစ်နေစဉ် အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲစတင်ဖြစ်၏ ။ ထိုအချိန်တွင် မြန်မာတို.သည် စစ်ရေးတွင် တစ်ဖက်သတ် အရေးနိမ်.မှုမရှိသေးချေ ။စစ်သူကြီးမဟာဗန္စုလသည် ရခိုင်၌ စခန်းချနေ၏ ။ မြ၀တီမင်းကြီးဦးစ က ပန်းဝါ၌ အင်္ဂလိပ်များကိုအနိုင်ရရှိကာ စစ်တကောင်း သို.ပါ လိုက်လံတိုက်ခိုက် ချီတက် သိမ်းပိုက်လိုနေသဖြင်. အင်္ဂလိပ်တို.ဌာနချုပ်ဖြစ်သောကာလကတ္တားမြို.ပင်ကျီးလန်.စာစားအခြေအနေမျိုးနှင်.ချောက်ချားနေလေသည် ။ ရခိုင်ကို ထိမ်းထားနိုင်ပြီး ၊ပန်းဝါတွင်အသာရနေသောအချိန်တွင် ညီတော်သာယာဝတီမင်းသားသည် မိမိတွင် စုစည်းထားသော နောက်လိုက်နောက်ပါ အင်အားတစ်သောင်းကို အရင်းပြုကာ သာယာဝတီနှင်. ပြည်တစ်ဝိုက်တွင် လူသူအင်အားထပ်မံဖြည်.ဆည်းကာအောက်မြန်မာနိုင်ငံကို
ကာကွယ်ခွင်.တောင်းသည် ။ အလောင်းဘုရား၏ မျိုးဆက်ပီပီ စစ်ရေးစစ်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်သော ဟံသာဝတီမင်းသား ၊ စစ်သူကြီး မဟာဗန္စုလ ၊ မြ၀တီမင်းကြီးဦးစတို.သာ စစ်မျက်နှာ သုံးခု ဖွင်.၍ တိုက်လျင် အင်္ဂလိပ်သည် မြန်မာကို မရှုံးသော် မှ ယခုလောက်လွယ်လွယ် စစ်နိုင်လိမ်.မည်မဟုတ် ။ ဤ အဖြစ်၌ တိုင်းပြည်၏ ကံကြမ္မာထက်မိမိ၏ အတ္တကိုရှေ.တန်းတင်လိုသော စီမံခန်.ခွဲမှု အမှားများသည် ဆက်တိုက်ဖြစ်လာ၏ ။ ဘုရင်.ယောက်ဖသာဖြစ်သော မင်းသားကြီးဦးအိုသည် နန်းဆီနန်းသွေး
မဟုတ်သဖြင်. နန်းဆီနန်းသွေးဖြစ်သော သာယာဝတီမင်းသား စစ်တပ်ကို ဦးဆောင်သွားလျင် မိမိထက်အစွမ်းအစပိုမိုပေါ်လွင်ထင်ရှားသွားမည်.အရေးကိ အဓိကစဉ်းစားကာ ၊ မိမိနာမည်မရတော.မှာကိုတွေးပူ၍ အစ်မတော် နန်းမတော်မယ်နုမှတစ်ဆင်. ယောက်ဖတော်ဘုရင်ကြီးကို သာယာဝတီမင်းသားအားမလွှတ်ဖို. ကတုန်းကတိုက်လုပ်၏ ။ မယားစကားအောင်သော ဘကြီးတော်ဘုရား သည်လည်း သာယာဝတီမင်းကိုစစ်ထွက်ခွင်. တားဆီးထားရာ အချိန်ကာလ ( ၅ )လတိတိကြာသွား၏ ။နောက်ဆုံးအခြေအနေမဟန်သောအခါမှ သာယာဝတီမင်းသားကိုလွှတ်သောအခါ မဟာဗန္စုလလည်းကျဆုံးခဲ.ပြီ ၊ ဦးစလည်းပန်းဝါမှ ဆုတ်ခဲ.ရပြီဖြစ်၍ အနိုင်တိုက်ရန်မဆိုထားဘိ ၊ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကို ရှေ.တက်မလာအောင်ပင် တားဆီးမထားနိုင်ခဲ.ပြီ ။ အင်းဝနန်းတော်အနားသို. အင်္ဂလိပ်သင်္ဘောများ ဧရာဝတီကိုဆန်တက်လာကာမှ နန်းမတော်မယ် နုနှင်. ဘကြီးတော် မင်းသည်သွေးပျက်ကာ သာယာဝတီမင်းကို ရန္တပိုစာချုပ်ဖြင်.စစ်ပြေငြိမ်းစေသဖြင်. မြန်မာ.မြေမှာ ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုအောက်သို.ရောက်လေသည် ။ ဤနေရာတွင် ဘကြီးတော်မင်းသည် Mismanagement (စီမံခန်.ခွဲမှုအလွဲအဖြစ် ) ရာထူးခန်.သင်.သူကိုမခန်.ခြင်း ၊ ဘယ်ကရောက်လာမှန်းမသိသော မိုးကျရွှေကိုယ် မောင်အိုကို မတန်မရာ ရာထူးနှင်.လုပ်ပိုင်ခွင်.များပေးခြင်း ( ထိုအကျင်.မှာ ၂၁ ရာစုဖြစ်သောယနေ.ခေတ်အထိ စွဲမြဲစွာကျင်.သုံးနေဆဲဖြစ်သည် ) ၊ စစ်တိုက်သင်.သည်.အချိန်တွင် စစ်သူကြီးကိုတိုက်ခွင်.မပေးခြင်း ၊မတိုက်သင်.တော.သော အချိန်မှ သွားရောက်တိုက်စေခြင်း စသည်.လွဲမှားမှုများအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ကာ အင်္ဂလိပ်တို. ခြေကုပ်ရသွားခြင်းဖြစ်သည် ။ စစ်ရှုံးရခြင်း၌ မြန်မာတို.ညံ.ဖျင်းမှုကြောင်. ရှုံးရခြင်းမဟုတ်ပဲ ခေါင်းဆောင် (ဘုရင် )၏ပျော.ညံ.မှု ၊ စီမံခန်.ခွဲမှုညံ.ဖျင်းမှုတို.ကြောင်.ရှုံးရခြင်းဖြစ်သည် ။ ၁၈၂၄ -၂၆ တွင် အင်္ဂလိပ်နှင်.မြန်မာမှာ လက်နက်အင်အား ၊လူအင်အားချင်းသိပ်ပြီးကွာလှသေးသည် မဟုတ်ချေ ။ ဤနေရာ၌ ဆောင်းပါးရှည်မည်စိုး၍ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ဒုတိယစစ်ပွဲ ၊တတိယစစ်ပွဲများ အကြောင်းကိုဇာတ်ကြောင်းမလှန်လိုတော.ပါ ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌ အရည်အချင်းရှိသောလူများ အောက်သို.ရောက်၍ အရည်အချင်းမရှိသော မောင်အိုလို လူစားများအထက်သို.ရောက်လာလျင် ထိုနိုင်ငံသည် လုံးဝဥသုံ ပျက်စီးခြင်းနှင်.ကြုံရမည်သာ ဓမ္မတာဖြစ်သည် ။
အတိတ်မှဖြစ်ရပ်များကို ဖယ်ခွာကာပစ္စုပ္ဖန်တည်.တည်.ရှုသောအခါတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမတိုး
တက်ရခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင်.လွဲမှားသော စီမံခန်.ခွဲမှုများကြောင်.ဆိုတာသိသာထင်ရှားလှသည် ။ နိုင်ငံတွင် လမ်းဘေးဈေးသည်မှအစ ၊ဒံပေါက်ဆိုင်အဆုံး အခွန်ဆောင်ရသည် ၊ဈေးကောက်ပေးရသည် ။သို.သော် နိုင်ငံ၏ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲကုမ္မဏီကြီးအတော်များများမှာ အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း
မရှိပဲလွတ်ကင်းနေနိုင်သည်မှာ စီမံခန်.ခွဲမှုမှားယွင်းခြင်း၏ ပြယုတ်ဖြစ်သည် ။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေလည်းရှိ ၊ တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ.လည်း ဒုတိယ သမ္မတဦးဆောင်ကာရှိနေပြီးပါလျက် နိုင်ငံတော်တွင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများပုံမှန်
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်မှာ စီမံခန်.ခွဲမှုညံ.ဖျင်းခြင်းဖြစ်သည် ။ နယ်ချဲ.အင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင်ပင် ရှိသမျှသစ်များကို အားလုံးပြောင်ကျသွားအောင် (ခုတ်နိုင်ပါလျက် ) မခုတ်ပဲ ရေရှည် အကျိုးကိုကြည်.ရကာ ၊ှု ခုတ်သည်.သစ်နှင်.စိုက်သည်.သစ် အမြဲမပြတ်လည်ပါတ်နေအောင် နိုင်ငံ၏သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု ဧရိယာကိုထ်ိမ်းသိမ်းနိုင်ခဲ.သော်လည်း ၊ကိုယ်.မင်းကိုယ်.ချင်း
ကိုယ်.အစိုးရခေတ်တွင် သူတစ်လူငါတစ်မင်း ခုတ်ချင်သူက ခုတ် နိုင်သလောက် အကန်.အသတ်မရှိ အလွန်အကျွံသစ်ထုတ်မှုကြောင်. သစ်တောများ ကုန်သလောက်ဖြစ်သွားတာလည်း ညံ.ဖျင်းသော စီမံခန်.ခွဲမှုပင်ဖြစ်သည် ။ အစိုးရရုံးဌာနများတွင် ဘာမှမတတ်သောသူများမိုးကျရွှေကိုယ်
အဖြစ်ရောက်လာကြခြင်းသည်လည်း အလွန်ဆိုးဝါးသော စီမံခန်.ခွဲမှုအလွဲများဖြစ်သည် ။ ၀န်ကြီးဌာနများတွင် ကျွမ်းကျင်မှုနှင်. ဌာနကို ရွေးခန်.ခြင်းမပြုပဲ ၊ ခင်မင်မှုဖြင်.ခန်.အပ်သောကြောင်. ၀န်ကြီးများလူမှန်နေရာမှန်မဖြစ်ကာ ကမောက်ကမဖြစ်နေကြခြင်းသည်လည်းစီမံခန်.ခွဲမှုအလွဲများဖြစ်သည် ။ တာတမံဆည်မြောင်းများကိုဆောက်လုပ်ခဲ.သော်လည်း ထိုအထဲတွင်တိုင်းပြည်အတွက် ဘာမှအသုံးမ၀င်သော ဆည်မြောင်း တာတမံများပါဝင်နေခြင်းကလည်း ညံဖျင်းသော စီမံကိန်း အလွဲများဖြစ်သည် ။ ပြောသော်ကုန်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိ ။
သားဘောလုံးအသင်းရှုံးသောအခါ ပရိသတ်အချို.သည် ခုံများကိုရိုက်ချိုးကြသည် ။ ပိုစတာအချို.ကိုမီးရှို.ကြသည် ။ ဘောလုံးအဖွဲ.ချုပ်ကလည်းထိုအခါမှ သွားလေသူနည်းပြဆရာ၏ အပုပ်များကိုဖော်ကောင်လုပ်ကြသည် ။ သို.သော် မေးရမည်.မေးခွန်းများမှာ ထိုနည်းပြဆရာ
ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မခန်.အပ်မီ ဘောလုံးအဖွဲ.ချုပ်သည် ထိုနည်းပြဆရာ၏ နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်နှင်. စွမ်းဆောင်ရည်အသေးစိတ်ကို သေသေချာချာ တိတိကျကျ လေ.လာဆန်းစစ်ခဲ.ကြဖူးပါသလား ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘောလုံးနည်းပြများ ရိုက်သတ်၍ မကုန်အောင်ပေါများနေသောခေတ်ကြီးဝယ် ကမ္ဘာ.ဘောလုံးလောက၀ယ် တတိယအဆင်.မှသာပါဝင်နေသော ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမှနည်းပြဆရာကို အဘယ်သို.သော စံများနှင်. အခြား ဘောလုံးအင်အားကြီးနိုင်ငံများမှ နည်းပြဆရာများကို
ကျော်ကာလွန်ခဲ.သော နှစ်နှစ်ကရွေးချယ်ခဲ.ပါသနည်း ။ မြန်မာနှင်.အင်ဒိုနီးရှားအသင်း ယှဉ်ပြိုင်မည်.နေ.က တစ်ဖက်အုပ်စုတွင်ပါဝင်နေသော ဗီယက်နမ်အသင်း ရှိပါလျက် ၊ကွင်းလည်ဒိုင်လူကြီးအဖြစ် ဗီယက်နမ်ဒိုင်ကိုတာဝန်ပေးခဲ.မှုကို မြန်မာနိုင်ငံသည် အိမ်ရှင်အခွင်.အရေးရှိပါလျက် အဘယ်ကြောင်. မကန်.ကွက်ပဲလက်ခံခဲ.ပါသနည်း။ မြန်မာနည်းပြဆရာ ကိုရီးယားလူမျိုးပါတ်ဆောင်ဟွာသည် ဘုရင်တစ်ဆူလို ဘောလုံးအဖွဲ.ချုပ်အပေါ်ပြုမူရလောက်အောင် နည်းပြငှားရမ်းစဉ်က နိုင်ငံတကာ စာချုပ်များထက်ပို၍ မည်သည်. အကြောင်းအချက်များကိုထည်.သွင်းချုပ်ဆို ခဲ.သနည်း ။ မြန်မာ.ဘောလုံးအဖွဲ.ချုပ်မှ နည်းစနစ်အကြံပေးအဖွဲ.သည် ကစားကွက်နှင်.ပါတ်သက်၍ ကျော်ကိုကိုမှ မေးမြန်မေးဆွေးနွေးသည်ကို ဘာကြောင်. မထောက်ခံပဲ ကျော်ကိုကို အား နည်းပြဆရာကို ကန်တော.တောင်းပန်စေခဲ.သနည်း ။အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်သော နည်းပြဆရာအားအဘယ်ကြောင်. ကစားပွဲစည်းမျဉ်းအကြောင်း အင်္ဂလိပ်လို ပေးဖတ်စေခဲ.သနည်း ၊အဘယ်.ကြောင်.ထိုစည်းမျဉ်းများကို စနစ်တကျ (Google Translate Machine ဖြင်.ပင်ဖြစ်စေ)ကိုရီးယား ဘာသာပြန် မပေးခဲ.သနည်းဟူသော နေရာမကျခဲ.သည်.စီမံခန်.ခွဲမှု အမှားများကိုတသီတတန်းကြီး မြင်ရမည်ဖြစ်သည် ။
မှားကာမှ အပြစ်များပြောကြ ၊ ဒေါသထွက်ကာပေါက်ကွဲကြသည်ထက် မြန်မာများ၏အရိုးစွဲနေသော
ဖြတ်ကတတ်ဆန်းလုပ်တတ်သည်.၀သီကိုသာအပြစ်တင်ရမည်ဖြစ်သည် ။ နည်းပြစငှားကတည်းက မိမိ ကြိုက်သောနည်းပြကို ပေးနိုင်မည်.ဈေးပြော၍ ကမ်းလှမ်းသည်.စနစ်ကိုလုပ်ရမည်.အစား ၊ ဒရ၀မ်တစ်ဦးအလိုရှိသည်ဟု ကြေငြာသလို အလုပ်လိုချင်သောနည်းပြများကို တင်ဒါစနစ်ဖြင်.ခေါ်ယူခြင်းကစ၍ လွဲနေပေသည် ။အလုပ်အလိုရှိသည်ဟုကြေငြာလိုက်ပါက အလုပ်လက်မဲ. အရည်အသွေးနိမ်.နည်းပြဆရာများသာ ကျွန်တော်တို.ဆီသို.ရောက်လာပါလိမ်.မည် ။ ရွှေဝယ်ချင်သူသည် ရွှေဆိုင်သို.သွားကာဝယ်ယူရသလို နည်းပြလိုချင်သူသည် ကိုယ်တိုင်လေ.လာ၍ ၀ယ်ယူရပါသည် ။ ထိုသို.မဟုတ်ပဲ သင်.တော်သောနည်းပြ ၃ ယောက်လောက် စာရင်းပို.ပေးပါဟု စီမံခန်.ခွဲမှု အမှားကြီးအတိုင်း အာရှဘောလုံးအဖွဲ.ချုပ်သို.ကုန်အမှာစာပို.သလိုလှမ်းမှာနေလျင် ချိုကျိုး နားရွက်ပဲ. အရည်အချင်းမမီသောရွေးကျ နည်းပြဆရာများသာမြန်မာ.ဘောလုံးလောက
သို.ရောက်လာပေလိမ်.မည် ။အရာရာကားစီမံခန်.ခွဲမှုညံ.ဖျင်းခြင်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည် ။ ၀န်ထမ်းများကိုလောက်ငအောင်မပေးသောအခါ လာဘ်စားခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာပေမည်။ လာဘ်စားခြင်းကိုမနှိမ်နှင်းသောအခါ အကြီးအကျယ် ခြစားမှု အပွကြံမှု ၊ သူဌေးဖြစ်သည်အထိ အဂတိလိုက်စားမှု များဖြစ်လာပေမည် ။မတတ်သူကိုနေရာပေးသောအခါ ဆုံးရှံးလေလွင်.မှုများ၊
ကိုယ်ကျိုးရှာအလွဲသုံးစားမှုများ ဖြစ်လာပေမည် ။ စီမံခန်.ခွဲမှုညံ.ဖျင်းသောအခါ ရုပ်ရှင်ရုံ
လက်မှတ်ရောင်းတာကအစ ၊ မီတာခဆောင်တာအပါအ၀င်အသေးအဖွဲကိစ္စများမှာပင်အလွဲလွဲ
မြန်မာသည် မတော်သည်မဟုတ် ။တစ်ဦးချင်းကျွမ်းကျင်မှုများစွာရှိသောလူမျိုးဖြစ်သည် ။ သို.သော် ခေတ်အဆက်ဆက် ကျွန်တော်တို.အားနည်းခဲ.သည်မှာ လူတော်များထံမှ တိုင်းပြည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်မည်ကဲ.သို. တွန်းအားပေးစီမံဆောင်ရွက်ကြမလဲဆို တာစေတနာမရှိကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို.မဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုင်လဲ စီမံခန်.ခွဲမှုကိုနေရာကျအောင်မလုပ်တတ် ။ လုပ်တတ်သူတို.လုပ်ပါရစေဆိုလာပြန်တော.လည်း မင်းသားကြီးမလုပ်ရလို.ပါတ်မကြီးကိုလာထိုးနေသ
လိုလို ၊ဆီသည်မလက်သုတ်ဖတ်လိုဖန်တရာတေနေသောဆင်ဝှေ.ရန်ရှောင်စကားတွေနဲ.တော. ပညာခေတ် ၊အိုင်တီခေတ်ကြီးဝယ် ဘယ်လိုမှ လူတောတိုးပြီးရပ်တည်လို.ရတော.မှာမဟုတ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည် ။ မောင်အိုလိုလူစားမျိုးနဲ.တော. ၂၀၁၅ တွင်ထပ်၍ မတွေ.လိုတော.ပါပြီ ။
Posted by Alex Aung at 11:00 AM